TikTok Yezve Bhizinesi: Svikira Vakasarudzika Vatengi Mune Ino Ipfupi-Fomu Vhidhiyo Network | Martech Zone
TikTok ndiyo inotungamira kuenda kune pfupi-fomu mbozhanhare vhidhiyo, ichipa zvirimo zvinonakidza, zvechiitiko, uye zvechokwadi. Pane kusahadzika kushoma nezve kukura kwayo:
TikTok ine 689 mamirioni evashandisi vanoshanda pamwedzi pasi rese.
Iyo TikTok app yakadzvanywa pamusoro pe2 mabhiriyoni nguva paApp Store neGoogle Play.
TikTok yakatarwa seyakanyanya-kurodha pasi app muApple's iOS App Store yeQ1 2019, iine anopfuura makumi matatu emamiriyoni ekurodha pasi.
62 muzana yevashandisi veTikTok muUS vari pakati pemakore gumi ne10.
TikTok yatora pasi pasi mazana matanhatu negumi nemazana emamiriyoni nguva muIndia, ayo akatenderera makumi matatu muzana ezvekushandisa pasi rese kurodha pasi.
Kana zvasvika panguva yezuva nezuva yakashandiswa paTikTok, vashandisi vanoshandisa avhareji yemaminetsi makumi mashanu nemaviri pazuva pazuva paapp.
TikTok inowanikwa mune nyika zana nemakumi mashanu neshanu, uye nemitauro makumi manomwe nemashanu.
90 muzana yevashandisi vese veTikTok vanowana iyo purogiramu zuva nezuva.
Mumwedzi isingasviki 18, huwandu hwevashandisi vakuru veTikTok hwakakura ka5.5 nguva.
Pakanga paine avhareji nhamba yeanopfuura mamirioni emavhidhiyo akaonekwa zuva rega rega mugore.
Kunobva: Oberlo - 10 TikTok Statistics Iyo Yaunofanirwa Kuziva muna 2021
Seimwe yeanonyanya kufarirwa maapplication, TikTok inopa makambani mukana wekusvika nharaunda yakakura yevashandisi vanoisa pamberi pevaraidzo uye chokwadi.
TikTok Yebhizimusi ndeimwe chete yemambure akasangana nekukura kwakakura paIOS (+ 52% share yemusika) Iyo social network yakakwira 1 nzvimbo muIOS kuenda ku # 7 uye 1 nzvimbo mu Android kumhara pa # 8. Padanho repuratifomu-chikamu chikamu, chakasvika kumusoro kwepamusoro mashanu emagetsi muVaraidzo, Zvemagariro, Hupenyu, Hutano & Kusimba, Mari, Photography, uye Utility Boka.
ZvirongwaFlyer Performance Index
TikTok Ads Maneja
NaTikTok Ads Manager, makambani uye vashambadziri vane mukana wekubhidha uye kuisa In-App Ads (IAA) kana kutanga yavo nharembozha App Kuiswa kune yepasirese vateereri veTikTok uye yavo mhuri yezvibatsiro. Kubva kunongedzera, kushambadzira kushambadzira, mishumo yekuziva, uye maturusi ekushambadzira maturusi - TikTok Ads Maneja inokupa ine simba, asi iri nyore kushandisa chikuva iyo ichakubatsira iwe kusvika kune vateereri vanoda zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
TikTok Ad Kuiswa uye Mafomati
Iwe kushambadza kunogona kuoneka mune imwe yenzvimbo dzinotevera zvichibva paapp.
TikTok kuiswa: Ads ichaonekwa seye mu-feed ads
Newfeed maapplication kuiswa: Ads ichaonekwa munzvimbo dzinotevera:
BuzzVideo: mune-chikafu, peji rezita, post-vhidhiyo
TopBuzz: mune-chikafu, peji rezita, post-vhidhiyo
Babe: mune-chikafu, peji reruzivo
Pangle kuiswa: Ads ichaonekwa mu sezviziviso zvinotambika, Interstitial vhidhiyo kushambadzira, kana mubairo wevhidhiyo kushambadzira.
TikTok Ads Manager inotsigira zvese mufananidzo ad uye vhidhiyo kushambadzira formats:
Image Ads - inogona kuve yenzvimbo uye zvese PNG kana JPG zvinogamuchirwa nechisarudzo chakatemwa cheinosvika 1200px kureba ne 628px yakafara (yakatwasuka kushambadza kunogona kugarwa futi).
Vhidhiyo Ads - zvinoenderana nekwaungada kudziisa, zviyero zve9: 16, 1: 1, kana 16: 9 zvinogona kushandiswa nemavhidhiyo masekondi mashanu kusvika masekondi 5 mu .mp60, .mov, .mpeg, .4gp , kana .avi fomati.
TikTok inopa Vhidhiyo Template, chishandiso chinoita kugadzira vhidhiyo kushambadzira nekukurumidza uye nyore. Iwe unogona kungogadzira vhidhiyo kushambadza nekusarudza template uye kurodha mifananidzo yako, zvinyorwa, uye marogo.
TikTok: Kuchengeta Webhusaiti Zviitiko
Kushandura vashandisi veTikTok kune vashandisi vewebhusaiti vanogona kushanyira kana kutenga zvigadzirwa kana masevhisi pane yako saiti zviri nyore neiyo TikTok yekuteedzera pixel.
TikTok: Kuchengeta In-App Zviitiko
Kana mushandisi akabaya / achiona kushambadza uye achitora zvimwe zviito sekurodha pasi, kumisikidza, kana kuita kutenga-mukati-app mukati meiyo seti yekushandura hwindo, iyo mobile Measurement Partners (MMP) inorekodha uye inotumira iyi data kudzokera kuTikTok sekushandurwa. Iyo data rekushandurwa, uchishandisa yekupedzisira-tinya chinongedzo, inozooneswa muTikTok Ads Manager uye ndiyo hwaro hwekugadzirisa mune ramangwana mumushandirapamwe.
TikTok yeBhizinesi Rekushandisa Nyaya: Slate & Taura
Sechitoro chakazvimirira chezvishongo, Slate & Taura vaitsvaga kuvaka ruzivo nekufungisisa panguva yepamusoro yekutengesa mwaka. Nekushandisa TikTok Yezve Bhizinesi iri nyore kushandisa Smart Vhidhiyo yekugadzira chishandiso uye nekugadzirisa mushandirapamwe kuzviitiko, ivo vakagadzira zvinonakidza uye zvine hungwaru zvigadzirwa zvakasvikira vashandisi ve4M TikTok uye zvakakonzera chiuru chimwe chete chikamu. Wedzera kungoro shanduko, ichivabatsira kuzadzisa chinangwa chavo che2X kudzoka-pane-kushambadza-shandisa mukati memwedzi mitanhatu chete.
Kutanga paTikTok Nhasi!
Tags: b2cb2c kushambadzakushambadzira kwevatengiiaamu-app kushambadzamu-app kuisamobile advertisingTikToktiktok kushambadzatiktok ads managertiktok yebhizinesitiktok statstiktok zviitiko zvewebsitemavhidhiyo kushambadzavhidhiyo kushambadzira